स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भएको विवरण किन लुकायो टेकु अस्पतालले? :: विवेक राई :: Setopati
काठमाडौं, भदाै २८
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आफ्ना कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको दाबी गर्दै आएपनि यसअघि नै अस्पतालका दुई जना चिकित्सक र दुई जना कार्यालय सहयोगीलाई संक्रमण देखिएको खुलेको छ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार झन्डै तीन साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेकु अस्पतालका चिकित्सकसहित सबै कर्मचारीको परीक्षण गर्दा दुई जना चिकित्सकमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
अहिले ती दुबै चिकित्सक निको भएर काममा फर्किएको स्राेतले बताएकाे छ। तर अस्पतालले भने उक्त सूचना लुकाएर कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण नदेखिएको बताउँदै आएको थियो।
गत बुधबार मात्र आइसियूमा रहेका संक्रमितहरूको सरसफाइ गर्ने दुई जना सहयोगी महिलालाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्याे, 'उहाँहरू आइसियूमा रहेका विरामीहरूको सरसफाइमा खटिनुभएको थियो। पछि परीक्षण गर्दा उहाँहरूमा संक्रमण पुष्टि भयो।'
अहिले दुई जना संक्रमित सहयोगी महिलामध्ये एक जना घरमै 'होम आइसोलेसन' र अर्का एक जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने एकजना चिकित्सक र दुई जना कार्यालय सहयोगीलाई संक्रमण भएको जनाए।
सुरुमा सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण नदेखिएको बताएपनि पछि कुरा फेर्दै एक जना चिकित्सकमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वीकारे।
'तीन साताअघि एक जना चिकित्सकमा संक्रमण देखिएको थियो तर उहाँ निको भएर पनि ड्युटीमा आउन थालिसक्नुभयो,' उनले भने।
निर्देशकले गलत सूचना दिएको स्राेतकाे भनाइ छ। 'मसँग प्रमाण नै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका सबैको परीक्षण गर्ने भन्दा दुई जना चिकित्सकलाई संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो। अहिले दुबै जना निको भइसक्नुभयो' स्राेतले भन्याे।
अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको कुरा किन लुकाइयो भन्ने बारेमा निर्देशक राजभण्डारीले ती चिकित्सकमा अस्पतालबाट नभएर परिवारबाट संक्रमण भएको जिकिर गरे।
उनले आलटाल गर्दै भने, 'उहाँको घरमा पनि संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अस्पतालबाट संक्रमण सरेको होइन।' अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने सूचना लुकाएर अस्पतालले दुष्प्रचार गरेको जनाए।
'स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संक्रमण भइरहेको छ भने अस्पतालले किन यस्तो र त्यस्तो तालिम दिएर कसैलाई पनि संक्रमण हुन दिएका छैनौं भनेर गलत प्रचार गरेको?,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २८, २०७७, ०८:०८:००